Semalt: WordPress Plugin ho an'ny tranonkalanao - Top Advice
Ireo lohahevitra amin'ny WordPress dia ahafahan'ny mpampiasa manamboatra karazana tranonkala mahafinaritra. Na izany aza, ny fizotry ny famolavolana dia mifidy ny lohahevitra tonga lafatra tena sarotra. Soa ihany fa azo atao ny manapaka ny tranombokim-pitaterana ao anaty sokajy malalaka na premium, sy tanjona tokana na maromaro samihafa.
Oliver King, iray amin'ireo manam-pahaizana za-draharaha matihanina avy amin'ny Semalt , dia manome filazalazana mahasoa momba an'izany.
Ny fahasamihafana eo amin'ny WordPress Premium Theme
WordPress dia manampy ny fototra ho an'ny tranonkalanao. Ny tontolon'ny WordPress tena tsara dia manatsotra kokoa ny manova ny tranokalanao amin'ny zavatra tianao. Fidio izay safidinao. Ilaina ny voalohany hahatakatra ny safidy azonao.
Free WordPress themes dia tsara ho an'ireo mpampiasa izay tsy manana teti-bola nefa mitady vahaolana amin'ny tranokala. Ny lohahevitra malalaka dia tsy manome tombombarotra ho an'ny mpandraharaha amin'ny famaritana. Ireo mpikam-bola dia mety tsy afaka amin'ny fahafahana, amin'ny toe-javatra sasany, mba hanolotra fanohanana matotra na fanavaozana tsy tapaka ho an'ireo mpampiasa azy. Ny vokany dia mamela ny vohikala ho mora vaky amin'ny loza mety hitranga.
Maro ireo lohahevitra maimaim-poana azon'ireo mpampiasa amin'ny tranokala. Na dia tsy natao hivarotana aza izy ireo, dia tadidio ny sainan'ny 'mpividy' ary tandremo tsara ny lohahevitra apetraky ny tranokalanao.
Ny Pros sy ny Cons des premiers WordPress Themes
Ny tombontsoa azon'ireo olo-maimaim-poana an-dalam-be dia ny hahazoany fanampiana vonona. Manery ny saram-potoana amin'ny fotoana fividianana azy ireo izy ireo, kanefa afaka miova arakaraka ny habetsahan'ny tranonkala tian'ny mpampiasa hametraka azy ireo izany. Ireo lohahevitr'ireo Premium dia mahazo fanavaozana tsy tapaka ary matanjaka kokoa. Indraindray izy ireo dia miala sasatra noho ny fisian'ny haingam-pandeha hamoaka karazana maromaro na dia tsy mahasoa ny mpampiasa rehetra aza izy ireo.
Ny fahasamihafana eo amin'ny tanjona tokana sy maromaro WordPress
Ny fifantenana eo amin'ny sehatra WordPress malalaka sy premium dia dingana iray fotsiny manoloana ny elatrao. Ary manaraka, mila manapa-kevitra ianao fa ny tranonkala dia mitaky foto-kevitra tokana na marika iray. 10)
Pros and Cons of Tanjona tokana WordPress Themes
Ireo lohahevitra tanjona tokana dia mifototra amin'ny sehatra iray manokana ao amin'ny tranonkala iray. Ohatra, mety karazana tranokala toy ny blaogy, na orinasa iray manokana izy ireo. Ny mpampiasa mahasoa dia manome ny 'vokatra' farany vokatra ary matetika no mora kokoa noho ireo lohahevitra marobe. Amin'ny fetrany amin'ny fampiasana azy, afaka manantena ny fanohanana kalitao ambony ianao
Tsy manamafy ny fahaizan'ny tranonkala ihany koa ny fetra. Midika izany fa raha toa ka mahatsapa toy ny fivoarana ny tranokalanao ianao amin'ny hoavy, dia mety mitady zava-baovao ianao satria ny foto-kevitra tokana dia tsy hanao izay ilaina.
Ny lohahevitra marobe dia lohahevitra tokana miaraka amin'ny fitaovana maro samihafa sy tanjona mikendry ny hampitombo ny tsena anjarany. Ireo lohahevitra ireo dia manana drafitra lavalava efa natsangana sy fametrahana ary fametrahana karazan-javatra maro ary ny WordPress plugins. Ny fampifandraisana dia ahafahana manangana tranokala ho an'ny faniriana rehetra. Ny hany afa-tsy ireo tranonkala misy fepetra ara-tetikasa avo lenta. Raha mifidy lohahevitra marobe avo lenta ianao dia mety tsy maintsy mividy lohahevitra hafa amin'ny ho avy ianao. Maro ny lohahevitra saro-bahana kokoa amin'ny fampidiran-drivotra ary tsy izy ireo no fomba tsara indrindra hikarakarana ny filàna manokana.
Kritè hifidianana ny lamaody
1. Tetibola: misafidy foto-kevitra maimaim-poana raha tsy manam-bola firy ianao. Raha tsy izany, ny tombontsoam-boninahitra dia mety hitondra soa ho anao amin'ny ho avy.
2. Inona no ataonao? Mifidiana foto-kevitra tokana tokana raha fantatrao ny karazana tranonkala tianao hivoahana, azonao antoka ny fepetra takiana, ary matokia fa tsy voatery miova ireo fotoana ireo. Raha mikatsaka fialam-boly tsy manam-paharoa sy fahafaha-manao zavatra ianao, dia ny loha-hevitra samihafa no tsara indrindra aminao.
Ny sasany amin'ireo toerana izay ahafahanao manomboka ny fikarohanao ny lohahevitra dia WordPress.org sy ThemeForest. Fitaovana malalaka ny WordPress.org, saingy afaka mitsidika ny ThemeIsle, HeroThemes, na ny Theme Nimbus amin'ny sehatra iray fanampiny momba ny loha-hevitra.
Na dia eo aza ny olana amin'ny teboka WordPress be dia be, ny fisintonana ny iray ho anao dia midika hoe mifanaraka amin'ny teti-bola ary avy eo ny mifanaraka amin'izay ilain'ny tranonkalanao Source .